Izindaba - UMnyango Wezokuvikelwa Kwemvelo usebenzise ngokusemthethweni izindinganiso ezintsha zokuvikelwa kwemvelo kwefenisha
NgoFebhuwari 1, uMnyango Wezokuvikelwa Kwezemvelo wakhipha "izidingo zobuchwepheshe zemikhiqizo yelebuli yemvelo (HJ 2547-2016)" eyenziwe ngokusemthethweni, futhi "ifenisha yezidingo zobuchwepheshe yemikhiqizo yokulebula yendawo" (HJ / T 303-2006) yaqedwa .
Imikhiqizo yefenisha izoba nezimpawu zokuvikela imvelo
Izinga elisha licacisa imigomo nezincazelo, izidingo eziyisisekelo, okuqukethwe kwezobuchwepheshe nezindlela zokuhlola zemikhiqizo yokulebula yendawo yefenisha. Kusebenza ifenisha yasendlini, kufaka phakathi ifenisha yokhuni, ifenisha yensimbi, ifenisha yepulasitiki, ifenisha ethambile, ifenisha ye-rattan, ifenisha yamatshe engilazi nenye ifenisha nezinye izinsimbi, kepha indinganiso ayisebenzi kwimikhiqizo yekhabhinethi. Kuyaqondakala ukuthi uhlobo olusha lweleveli ngokuvamile luqinile, futhi kunezidingo ezimbalwa zokuvikelwa kwemvelo. Ngemuva kokuqaliswa kwezinga, imikhiqizo yasendlini ehlangabezana nezinga iyoba nophawu lokuvikelwa kwemvelo, olukhombisa ukuthi umkhiqizo awuhlangabezani nje kuphela namazinga ahambisanayo womkhiqizo nokuphepha, kepha futhi uhlangabezana nezidingo zikazwelonke zokuvikelwa kwemvelo ngenkathi kwenziwa umkhiqizo futhi usebenzise.
Izinga elisha lenyusa izidingo zezinto zokusetshenziswa zesikhumba nezesikhumba sokufakelwa, landisa izidingo zokubuyiselwa kwemfucuza kanye nokwelashwa enqubeni yokukhiqiza, lilungisa izidingo zemikhawulo yezinto ezinobungozi ekugqokeni izinkuni okuncibilikisiwe, futhi landisa izidingo zemikhawulo wezinto ezidluliswayo nama-phthalates emikhiqizweni.
Izinga elisha licacisa imininingwane eminingi
Izinga elisha lidinga ukuthi enqubeni yokukhiqiza, amabhizinisi okukhiqiza ifenisha kufanele aqoqe futhi alaphe imfucuza eyenziwe ngokuhlukaniswa; ukuqoqa ngempumelelo futhi uphathe sawdust nothuli ngaphandle kokukhipha ngqo kwinqubo yokumboza, kufanele kuthathwe izinyathelo ezisebenzayo zokuqoqa igesi futhi kufanele kulashwe ugesi kadoti oqoqiwe.
Ukuthatha izidingo zokuvikelwa kwemvelo kwencazelo yomkhiqizo njengesibonelo, incazelo yomkhiqizo eshiwo kuzinga elisha kufanele ifake: izinga lekhwalithi lomkhiqizo nezinga lokuhlola okususelwe kulo; uma ifenisha noma izesekeli zidinga ukuhlanganiswa, kufanele kube khona imiyalelo yomhlangano kumdwebo; imiyalo yokuhlanza nokugcina imikhiqizo ngezinto ezahlukene ngezindlela ezahlukahlukene; izinto ezisetshenziswa emikhiqizweni nalezo ezizuzisa imvelo zokuphinda zisetshenziswe futhi zilahlwe Ulwazi.